Kutheni le nto amaYouTube amaxwebhu agqithisa kangaka kule mihla? -YTpals
I-YouTube likhaya kwiintlobo ezahlukeneyo zevidiyo. Ngelixa iividiyo ezimfutshane nezimnandi ngokukhawuleza ziba yinto yesiqhelo, kukho enye into ekhula kakhulu. Sithetha ngamaxwebhu e-YouTube apha. I-docuseries yile nto kanye ivakalayo ngathi: luxwebhu olukwimo yochungechunge. Abadali abaninzi babone impumelelo enkulu kumashishini abo. Ababukeli bayathanda ukuba kude kwimonotony yemiboniso ebhaliweyo kunye namabali ayintsomi. Makhe sihlolisise ukuba yintoni eyanika ama-docuseries ukhuthazo lwenkcubeko kunye nokuba luphethe ntoni kwikamva.
Kutheni le nto abantu bathanda uthotho lwamaxwebhu?
Kunzima, ukuba akunakwenzeka, ukufumana kanye le nto inike ama-docuseries umda ngaphezulu kwezinye iindlela zokudala ividiyo. Kukho izinto ezahlukeneyo apha. Ukuthandwa kwee-docuseries akuthethi ukuba ezinye iintlobo zibona ukwehla. Kuthetha ukuba eli candelo libona ukukhula okukhawulezayo kunamanye.
Inxalenye yesibheno sexwebhu yinyani yenyani. Ukwazi ukuba izinto ozibonayo zenzekile komnye umntu kubomi bokwenyani zenza ukuba amava abe nefuthe ngakumbi. I-docuseries ihlala ikhuthaza ngandlela thile. Umzekelo, ii-docuseries ezijolise kumaqela eembaleki zinika umbono wento eyenzekayo emva kokuqaqamba kwaye kukhanye esikubona kwiTV. Banokudityaniswa okugqibeleleyo kolwazi kunye nokuzonwabisa.
Kutheni le nto iYouTube liqonga elilungileyo lamaxwebhu?
Ngokungafaniyo neqonga le-OTT, iYouTube liqonga elivulekileyo apho wonke umntu edubule ngempumelelo. Uhlobo lwamaxwebhu lubanga inqanaba lokuzimela. Ngaphandle kwenkululeko eyimfuneko, abalawuli kunye nabenzi bevidiyo abazukufumana thuba lokuphonononga izihloko ze-niche kunye ne-offbeat. Kuba liqonga elivulelekileyo kubo bonke, iyantlukwano kunye noluhlu lwezifundo ziyamangalisa. Unokufumana uxwebhu olubhaliweyo nasiphi na isifundo phantsi kwelanga. Nabani na onobuchule obuhle kunye namandla okubalisa ngoku unethuba lokubonisa italente yakhe kwihlabathi. Ukuba abantu bayawuthanda umsebenzi, uya kuduma. Ngaphantsi kweenkampani ezinkulu, le nkululeko yobugcisa ihlala ilahleka.
Iidrafti zeYouTube kukuphefumla komoya omtsha phakathi kwesiqhu somdlalo weqonga.
Iintlobo ezithandwayo ze-YouTube docuseries
I-YouTube inika yonke imixholo kunye nesihloko kwifoto efanelekileyo, kodwa ababukeli bahlala bezithanda ezinye iintlobo kunezinye. Ezona ntlobo zidumileyo zedokodo ngoku zisusela kwimbali ukuya kwezolwaphulo-mthetho kunye nemfihlakalo. Kukho ibango elikhulu lomxholo wokupheka ngoku, njengoko abantu abaninzi bechitha ixesha emakhayeni abo. Abantu bahlala befuna ukujonga ngaphezulu kweebhloko zokutya ezisisiseko kwimbali kunye nokubaluleka kokutya okuthile. Abadali abaninzi benza umsebenzi omkhulu kolu hlobo. Icandelo lokubuka iindwendwe kunye nokhenketho linceda kakhulu kuthengiso lwe-YouTube.
Ngokufanayo, amaxwebhu eembaleki ayathandwa ngalo lonke ixesha. Iiklabhu zemidlalo kunye neenkampani zihlala zikhuthaza amaqela abo ngentengiso yevidiyo kwiYouTube. I-docuseries elungileyo inokutsala umdla wombukeli kwiimbaleki ezithile, kwiiklabhu, okanye nakwezemidlalo.
Ulwaphulo-mthetho kunye noxwebhu oluyimfihlo luhlobo olubanzi, kubandakanya uninzi lweentlobo ezahlukeneyo. Yonke into esuka kumaxwebhu amalunga ne-UFOs ukuya kwiimfihlakalo zokwenyani zokubulala iwela kolu luhlu. Zombini ezi ntsomi kunye namabali angeyonyani ngale nto inomdla kubabukeli abaninzi. Olunye olona luhlu lubalaseleyo lwe-YouTube olukulo mbandela.
Ithetha ntoni ikamva le-YouTube?
I-Docuseries inokubakho njengophethe iflegi elandelayo ye-YouTube yokudala ividiyo. Inazo zonke izithako eziyimfuneko zempumelelo. Alukho olunye uhlobo olunokuba lolonwabisa kwaye lube lolufundisayo ngaxeshanye. Njengoko ukwenziwa kwefilimu kuguquka, sinokulindela amaxwebhu amatsha ngakumbi malunga nezifundo ezingaqhelekanga. I-YouTube liqonga elifanelekileyo lokudala nokwabelana ngamaxwebhu. Inika umbono ebantwini kwaye inokubangela umdla wabantu.
Kulabo bajonge ukuqala kohambo lwabo kwimiboniso bhanyabhanya yeYouTube, ubuchule kunye noncedo lobuchwephesha luza kuluncedo. I-YTpals zibonelela ngazo zonke izixhobo kwaye ikuncede ulonyuse ishishini lakho. Ukuba uyi-YouTuber ozama ukuyenza ibe nkulu, jonga kwi-YTpals ngolwazi olungcono kunye noncedo lokufumana abalandeli okanye simahla Ababhalisile be-YouTube.
Kutheni le nto amaYouTube amaxwebhu agqithisa kangaka kule mihla? ngababhali beYTpals, 30 Septemba 2021
Uyenza njani iividiyo zeYouTube ezikwinqanaba elifanelekileyo kuGoogle?
Njengomxholo wakho obhaliweyo, njengeebhlog zakho kunye namanqaku kwiwebhusayithi yakho, iividiyo zakho zifuna isidanga esifanelekileyo sokwenza ukuba babekwe kwinqanaba leSERP zikaGoogle. IYouTube ibe yeyesithathu ngobukhulu…
Umakhi weVidiyo yeYouTube-Isixhobo se-DIY samashishini
Nge-Epreli 2020, Umakhi weVidiyo yeYouTube, isixhobo esenziwe nguGoogle sokwenza iintengiso ezimfutshane kuYouTube, wenza amatyala akhe. Abaphathi beakhawunti kaGoogle kuye kwafuneka bacele ukufikelela kuhlobo lwe-beta yesixhobo, kwaye…